Qur’aan: Kala duwanaansho ma leh! Xadiisyada maxay sheegayaan? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
“Qur’aanku waa kitaabkii asalka ahaa – isku luqad, xarfo iyo akhrin. Ma jirto meel loogu talagalay fasiraadda aadanaha ama turjumidda kharriban… Haddii aad ka qaadato nuqul Qur’aan ah guri kasta oo adduunka ah waxaan ka shakisanahay inaad xitaa ka heli doonto farqi u dhexeeya. ”
Saaxiib ayaa ii soo diray qoraalkan. Wuxuu isbarbar dhigayay qoraalka Qur’aanka Kariimka ah iyo kan Injiilka/Baybalka. Afar iyo labaatan kun oo qoraalo qadiimi ah oo Injil ah ayaa jira waxayna leeyihiin kala duwanaansho yar, halkaas oo ereyo kooban ay ku kala duwan yihiin. In kasta oo dhammaan mawduucyada iyo fikradaha ay isku mid yihiin dhammaan qoraallada 24000, oo ay ku jiraan dulucda Ciise oo nagu furtay dhimashadiisa iyo sarakiciddiisa, sheegashada ayaa badanaa la sameeyaa, sida kor ku xusan, in aysan jirin wax kala duwanaansho ah oo Qur’aanka ah. Tan waxaa loo arkaa inay tilmaamayso Qur’aanka inuu ka sarreeyo Kitaabka Quduuska ah, iyo caddaynta ilaalinta mucjisada ah. Laakiin maxay xadiisyadu inooga sheegeen samaynta iyo isku -dubaridka Qur’aanka?
Samaynta Quraanka Nebiga ilaa Khaliifyada Cumar bin Al Khaddaab wuxuu ka sheekeeyay:
Waxaan maqlay Hishaam bin Xakiim bin Xizam oo akhrinaya Surat-al-Furqaan si ka duwan kayga. Rasuulka Alle ayaa i baray (si kale). Markaa, waxaan damcay inaan la murmo (salaadda dhexdeeda) laakiin waxaan sugay ilaa uu dhammaystay, markaasaan dharkiisii ​​qoorta ka xidhay oo aan ku qabtay oo aan u keenay Rasuulka Alle oo aan ku iri, waxaan maqlay isagoo akhrinaya Suurat -al-Furqaan si ka duwan sidii aad iigu bartay. ” Nebigu wuxuu amray inaan sii daayo wuxuuna ka codsaday Hishaam inuu akhriyo. Markii uu akhriyay ayuu Rasuulkii Alle yiri, “sidaas baa lagu soo dejiyay”. Kadib wuxuu iga codsaday inaan akhriyo. Markii aan akhriyay ayuu igu yiri sidan baa lagu soo degay, Qur’aanka waxaa lagu soo dejiyay toddoba siyaabood oo kala duwan, ee u akhri sida kuugu sahlan.
Saxiixul-Bukhaari 2419: Buugga 44aad, Xadiiska 9aad
Ibnu Mascuud ayaa weriyay:
Waxaan maqlay qof si gaar ah u akhrinaya Aayad (Qur’aan) ah, waxaanan maqlay Nebiga oo isla aayadda si kale u akhrinaya. Markaa waan u geeyay nebiga oo waan u sheegay arrintaas laakiin waxaan ka arkay wejigiisa calaamad diidmo, ka dibna wuxuu igu yidhi, “labadiinaba waad saxsan tihiin, ee ha kala duwanaanin, waayo ummadihii idinka horreeyey way is khilaafeen, sidaas darteed waa la burburiyay. ”
Saxiixul Bukhaari 3476: Kitaabka 60aad Xadiiska 143
Labadani waxay si cad noogu sheegayaan in intii Nebi Maxamed noolaa ay jireen dhawr nooc oo kala duwan oo Qur’aanka lagu akhriyay oo uu adeegsaday oo oggolaaday Maxamed . Haddaba maxaa dhacay dhimashadiisa kadib?
Abuu Bakar iyo Quraanka
Waxaa wariyay Zaid bin Thabit:
Abuu Bakar As-Siddiiq ayaa ii soo diray markii la dilay dadkii Yamaama (yacni tiro ka mid ah saxaabadii Nabiga ee la dagaallantay Musailima). (Waan u tegey) oo waxaan helay Cumar bin Al Khaddaab oo la fadhiya Abuubakar ayaa markaa yiri (aniga), “Cumar baa ii yimid wuxuuna igu yiri: Khasaaradu waxay ku cuslaayeen Qur’aanka Qur’aanka (yacni kuwa garanayey Qur’aanka qalbiga) maalintii dagaalka ee Yamaama, waxaanan ka baqayaa in khasaare badan oo intaas ka badan uu Qur’aanka dhexdiisa ka dhaco goobaha kale ee dagaalka, halkaas oo laga yaabo in qayb weyn oo Qur’aanka ka mid ahi lumo. Sidaa darteed waxaan kuu soo jeedinayaa, adiga (Abuubakar) inaad amarto in Quraanku noqdo “Sidee baad u samayn kartaa wax uusan Rasuulkii Alle samayn?” Ayaa lagu yidhi Cumar. Mashruuc wanaagsan. ” Markaas buu Abuu Bakar yiri (aniga). ‘Adigawaa nin dhallinyaro ah oo caqli badan annaguna wax shaki ah idinkagama jiro, waxaadna qori jirteen waxyiga Illaahay ee Rasuulka. Markaa waa inaad raadisaan (qoraallada jajaban) ee Qur’aanka oo aad ku ururisaan hal kitaab. “Wallaahi baan ku dhaartaye Haddii ay igu amri lahaayeen inaan u wareejiyo mid ka mid ah buuraha, iguma aynaan ka cuslahayn amarkan igu amraya soo qaado Quraanka. Markaasaan Abuubakar ku idhi, sidee baad u samayn doontaa wax uusan Rasuulka samayn? ”Abuubakar ayaa ku jawaabay,“ Wallaahi baan ku dhaartaye, waa mashruuc wanaagsan ”. si aan u aqbalo fikradiisii ​​ilaa uu Eebbe laabtayda u furay wixii uu ka furay laabta Abuubakar iyo Cumar.Sidaas darteed waxaan bilaabay inaan raadiyo Qur’aanka oo aan ka soo ururiyo (waxa ku qoran) caws timireed, dhagxaan cad oo dhuuban iyo sidoo kale nimankii qalbiga ku ogaa, ilaa aan ka helay Aayaddii ugu dambaysay ee Suuradda at-Tauba (Toobadda) ee Abi Khuzaima Al-Ansaari, oo aanan ka helin cid aan isaga ahayn, Aayaddu waa: waxaa idiin yimid Rasuul dhexdiinna ka yimid, wuxuuna ka murugoodaa inaad dhaawac iyo dhibba aad la kulantaan .. (ilaa dhammaadka Surat-Baraa ‘ (at-Tauba) (9.128-129). Kadibna qoraalladii oo dhammeystiran (nuqul) ee Qur’aanka ayaa la joogay Abuu Bakar ilaa uu ka dhintay, kadibna Cumar ilaa dhammaadkii noloshiisa, kadibna Xafsa, gabadhii Cumar.
Saxiix al-Bukhaari 4986: Kitaabka 66aad, Xadiiska 8
Tani waxay ahayd markii Abuu Bakar uu khaliif ahaa, isagoo si toos ah uga dhaxlay Maxamed Waxay noo sheegaysaa in Maxamed uusan weligiis Qur’aanka ku soo ururin qoraal caadi ah ama uusan siin wax tilmaamaya in waxaas oo kale la sameeyo. Iyada oo ay dagaallo culus ku dhinteen kuwii Qur’aanka xusuusta garanayey, Abuu Bakar iyo Cumar (wuxuu noqday Khaliifkii 2aad) waxay Zaid ku qanciyeen inuu bilaabo inuu Qur’aan ka soo qaato meelo kala duwan. Zaid markii hore wuu diidanaa maxaa yeelay Maxamed marna muu muujin baahida loo qabo in la jaangooyo qoraalka. Wuxuu dhowr qof oo saaxiibbadiis ah ku aaminay inay Qur’aanka baraan kuwa raacsan sida xadiiska soo socda inoo sheegayaa. Masriq ayaa wariyay: Cabdullaahi bin Camr wuxuu xusay Cabdullaahi bin Mascuud wuxuuna yiri:
“Waligay waan jeclaan doonaa ninkaas, waayo waxaan maqlay Nebiga (ﷺ) oo leh, Qur’aanka ka qaado afar: Cabdullaahi bin Mascuud, Saalim, Mucaad iyo Ubai bin Kacab.
“Saxiix al-Bukhaari 4999: Kitaabka 66aad, Xadiiska 21
Si kastaba ha ahaatee, Nebiga (NNKH) ka dib dhimashadii khilaaf baa ka dhex dhacay saxaabada sababtuna waa akhrintaas kala duwan. Xadiiska hoos ku qoran wuxuu ka warramayaa ismaandhaafka ku jira suuradda 92: 1-3 (Al-Layl)
Waxaa wariyay Ibraahim:
Saxaabigii Cabdullaahi (bin Mascuud) ayaa u yimid Abuu Dardaa, (kahor intaanay imaan gurigiisa), wuu raadiyay wuuna helay. Markaasuu weydiiyey, oo ku yidhi, Yaa dhexdiinna ku akhrin kara (Quraanka) sida uu Cabdullaahi u akhrinayo? Alqama. Markaasuu weydiiyey Alqama, sideed ku maqasheen Cabdullaahi bin Mascuud oo akhrinaya Suurat Al-Lail (Habeenka)?
Abuu Ad-Dardaa wuxuu yiri,
“Waxaan ka marag kacayaa inaan maqlay aniga oo Nebigu sidaas oo kale u akhrinayo, laakiin dadkani waxay rabaan inaan akhriyo:-‘Iyo kan abuuray lab iyo dhaddig.’ laakiin Allaah baan ku dhaartaye anigu ma raaci doono ”.
Webka USC-MSA (Ingiriisi) tixraac: Vol. 6, Buugga 60aad, Xadiiska 468Aragti Carabi:
Buugga 65aad, Xadiiska 4944
Qur’aanka maanta wuxuu leeyahay akhrinta 2aad ee suuradda Al-Layl 92: 3. Waxaa xiise leh Cabdullaahi, oo ka mid ah afarta xadiis ee hore gaar ahaan uu si gaar ah u tilmaamay Nebi Maxamed inuu awood u leeyahay akhrinta Qur’aanka, iyo Abu Ad-Dara wuxuu u adeegsaday akhrin ka duwan aayaddan mana doonayn inay raacaan kuwa kale.
Xadiiska soo socdaa wuxuu muujinayaa in dhammaan gobaladii boqortooyadii islaamku ay la socdeen akhrino kala duwan, ilaa heer uu qofku xaqiijin karo halka uu qof ka yimid akhrinta uu adeegsaday. Xaaladda hoose, Ciraaqiyiinta reer Kuufa waxay raaceen akhrinta Cabdullaahi bin Mascuud ee suuradda 92: 1-3.
Alqama ayaa weriyey:
Waxaan la kulmay Abuu Dardaa ‘, wuxuuna igu yiri: Wadankee ka tirsan tahay? Waxaan iri: waxaan ka mid ahay dadka Ciraaq. Wuxuu haddana yiri: Magaaladee? Waxaan ugu jawaabay: Magaalada Kuufa. Wuxuu haddana yiri: Ma akhridaa sida ku cad akhrinta Cabdullaahi b. Mascuud? Waxaan iri: haa. Wuxuu yiri: Akhri aayaddan (Habeenku markuu daboolayo) Markaasaan akhriyay: (Habeenku markuu wax daboolo, iyo maalinta uu ifayo, iyo abuurista lab iyo dheddig). Intuu qoslay ayuu yiri: waxaan maqlay Rasuulka Alle oo sidan u akhrinaya.
Saxiixul Muslim 824 c: Kitaabka 6aad, Xadiiska 346
Ibnu Cabbaas wuxuu weriyay:
Cumar wuxuu yiri, Ubai ayaa noogu fiicneyd akhrinta (Qur’aanka) haddana waxaan ka tagnay qaar ka mid ah wuxuu akhriyo. Ubai waxay leedahay, waxaan ka qaatay afkii Rasuulka mana ka tegi doono
wax kasta. “2.106 Saxiix al-Bukhaari 5005: Buugga 66aad, Xadiiska 27aad
in kastoo Ubai loo tixgeliyey ‘kan ugu wanaagsan’ akhrinta Qur’aanka (Wuxuu ka mid ahaa kuwii uu hore u xusay Maxamed-), qaar kale oo bulshada ka mid ah ayaa ka tagay qaar ka mid ah waxa uu akhriyey. Waxa la isku khilaafay waxa la baabi’inayo iyo waxa aan ahayn. Is -maandhaaf ku saabsan akhrinta kala duwan iyo ka -noqoshada ayaa xiisad dhalisay. Waxaan ku aragnaa xadiiska hoose sida dhibkaan loo xaliyay.
Khaliif Cusmaan iyo Quraanka
Waxaa wariyay Anas bin Maalik:
Hudhaifabin Al-Yaman wuxuu u yimid Cusmaan markii reer Shaam iyo dadka Ciraaq ay wadeen dagaal si ay u qabsadaan Arminya iyo Adharbijan. Xudeyfa wuxuu ka baqay khilaafkooda (dadka Shaam iyo Ciraaq) ee kala duwanaanshaha akhrinta Qur’aanka, markaas buu Cusmaan ku yiri, “Amiirkii Mu’miniintoow, badbaadi ummaddan intaanay isku khilaafin kitaabka (Quraanka). ) sida Yuhuudda iyo Masiixiyiintu hore u sameeyeen.” Markaa buu Cusmaan farriin u diray Xafsa isagoo leh, “Noo soo dir qoraallada Qur’aanka si aan u soo uruurinno agabka Qur’aanka oo nuqulo kaamil ah oo aan kuugu soo celinno qoraallada .” Xafsa waxay u dirtay Cusmaan. Markaas buu Cusmaan amray Zaid bin Thabit, Abdullah bin AzZubair, Saciid bin Al-As iyo AbdurRahman bin Xaarith bin Hisham si ay dib ugu qoraan qoraallada oo nuqullo kaamil ah leh. Cusmaan wuxuu ku yiri saddexda nin ee Quraysh, “Haddii aad isku khilaaftaan Zaid bin Thabit meel kasta oo Qur’aanka ka mid ah, ka dibna ku qor lahjadda Quraysh, Quraanka wuxuu ku soo degay carrabkooda.” Sidii bay yeeleen, markii ay nuqullo badan qoreen, Cusmaan wuxuu u soo celiyey qoraaladii asalka ahaa Xafsa. Cusmaan wuxuu u diray gobol kasta oo Muslim ah hal nuqul oo ka mid ah waxay soo guuriyeen, wuxuuna amray in la gubo dhammaan agabkii kale ee Qur’aanka, ha ahaadeen kuwo ku qoran qoraallo jajab ah ama nuqullo dhan ah.
Saxiix al-Bukhaari 4987: Buugga 66aad, Xadiiska 9
Tani waa sababta aysan maanta u jirin akhrino kala duwan. Sababtu ma ahayn in nebi Maxamed (NNKH) uu keliya helay ama adeegsaday hal aqrin (ma uusan yeelin, wuxuu adeegsaday toddobo), ama in uu soo ururiyey Qur’aan awood leh. Ma uusan samayn. Dhab ahaantii, haddii aad ka raadiso ‘akhrinta kala duwan’ sunnada internetka waxaa jira 61 xadiis oo ka hadlaya akhrinta kala duwan ee Quraanka. maxaa yeelay Cusmaan (khaliifkii 3aad) wuxuu qaatay mid ka mid ah akhrinta, wuu tafatiray, wuxuuna gubay dhammaan akhrintii kale. Xadiisyada soo socdaa waxay muujinayaan sida tafatirkaani ugu sii jiro Qur’aanka maanta.
Ibnu Cabbaas wuxuu yiri: Cumar ayaa yiri,
“Waxaan ka baqayaa in waqti dheer ka dib, dadku ay dhihi karaan, kuma aragno Aayaadka Rajam (dhagax lagu dilo) Kitaabka Quduuska ah” waajibka Alle soo dajiyay. Bal eeg, waxaan xaqiijinayaa in ciqaabta Rajam la mariyo qofkii galmo sharci -darro ah sameeya, haddii uu mar hore guursaday oo dembiga lagu caddeeyo markhaatiyaal ama uur ama qirasho. ” Sufyaan wuxuu raaciyey, “Qisadaan sidan baan u xafiday.” Cumar wuxuu raaciyay, “Runtii Rasuulkii Alle (scw) wuxuu fuliyay ciqaabtii Rajam, annaguna sidaas ayaan samaynnay isaga dabadiis”.
Saxiixul Bukhaari 6829: Buugga 86aad, Xadiiska 56aad
Waxaa wariyey Ibnu Cabbaas:
Eebbe wuxuu ku soo diray Muxammad xaq wuxuuna ku soo dejiyey Kitaabka Quduuska ah Quranka, wixii Eebbe soo dajiyeyna waxaa ka mid ahaa Aayadda Rajam (dhagxaanta qofka is qaba (lab & dheddig) oo sameeya galmo sharci -darro ah, waana akhrinay aayaddan. wuuna fahmay oo xafiday, Rasuulka Alle wuxuu fuliyay ciqaabtii dhagax -tuurka annaguna sidaas oo kale ayaan samaynay isaga ka dib.
Bukhaari 6829 Book 86, Xadiis 57
Maanta ma jirto aayad ku saabsan dhagax -dhigga (Rajam) sinada Qur’aanka. Sidaas ayaa lagu tafatiray.
Waxaa wariyay Ibnu-Zubeyr:
Waxaan ku idhi Cusmaan, “Aayadan ku jirta Suuratul-Baqara:“ Kuwiinna dhinta ee ka taga carmallada … iyagoon ka leexin. ”Waxaa tirtiray aayad kale. Maxaad u qortaa (Quraanka)? ” Cusmaan baa yiri. “Ka tag (meesha uu joogo),…, waayo waxba kama beddeli doono wax ka mid ah (yacni Quraanka) meeshiisii ​​hore.”
Webka USC-MSA (Ingiriisi) tixraac: Daabacaadal. 6, Kitaabka 60, Xadiiska 60
Tixraaca Carabiga: Buugga 65, Xadiiska 4536
Halkan waxaan ku aragnaa khilaaf u dhexeeya Cusmaan iyo Ibnu Az-Zubair oo ku saabsan in ka-noqoshada aayadda micnaheedu yahay inay tahay ama aan ahayn in lagu hayo Qur’aanka. Cusmaan wuxuu lahaa dariiqii oo sidaas bay aayaddan maanta Quraanka ugu jirtaa.
Cusmaan iyo Ujeeddada Suuradda 9aad (At Tawbah)
Waxaa wariyay Cusmaan bin Caffaan: Yaziid Al-Faarisi wuxuu yiri: waxaan maqlay Ibnu Cabbaas oo leh: waxaan weydiiyey Cusmaan bin Caffaan: Maxaa kugu kallifay inaad dhigto (Suuradda) Baraarah oo ay leedahay mii’inka (suuradaha) (oo ka kooban boqol aayadood) iyo (Surah) al-Anfal oo ka tirsan mathani (Suuradaha) qaybta as-sab’u at-tiwal (suuradda dheer ee ugu horreysa ama cutubyada Quraanka), oo aadan ku qorin “Magaca Eebbaha Raxmaanka ah ee Raxmaanka ah ”ee dhexdooda ah?
Cusmaan wuxuu ku jawaabay: Markii aayaadka Qur’aanka lagu soo dejiyay Nabiga, wuxuu u yeeray qof u qora si uu ugu dhaho: ku rid aayaddan suuradda sidaan oo kale lagu sheegay; marka la soo dejiyo hal ama laba aayadoodna wuxuu oran jiray si la mid ah (iyaga ku saabsan). (Surah) al-Anfal waa suuraddii ugu horreysay ee lagu soo dejiyay Madiina, (Surah) Al-Baraahna waxaa lagu soo dejiyay Qur’aanka ugu dambayn, waxa ku jirana waxay la mid ahaayeen kuwii Al-Anfal. Sidaa darteed, waxaan u maleeyay inay tahay qayb ka mid ah al-Anfal. Sidaa darteed waxaan u kala dhigay qaybta as-sab’u at-tiwal (toddobada suuradood ee dhaadheer), mana aanan ku qorin “Magaca Eebe, Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista”
.Sunan Abii Daawuud 786: Kitaabka 2aad, Xadiiska 396
Surah 9 (at Tawbah ama Al Barah) waa suuradda qura ee Qur’aanka ah ee aan ku bilaaban ‘Magaca Alle, Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista. Xadiiskah wuxuu sharaxayaa sababta. Cusmaan wuxuu u maleeyay in suuradda 9aad ay ka mid tahay suuradda 8 mar haddii maaddadu ay la mid tahay. Su’aalaha waxaan ka arki karnaa in arrintani ay ahayd mid lagu muransan yahay bulshada muslimka hore. Xadiiska soo socda wuxuu muujinayaa falcelintii mid ka mid ah saxaabigii ku sameeyay Qur’aanka Cusmaan.
Cabdullaahi (b. Mascuud) wuxuu wariyey inuu (ku yiri saaxiibbadiis inay qariyaan nuqullada Quraanka) wuxuuna sii yiri:
Ruuxii qariya wax kasta waa inuu keenaa wuxuu qariyay maalinta Qiyaame, markaasuu dhahay: Akhriskiisa yaa i faraya inaan akhriyo dabadeed? Runtii waxaan akhriyay ka hor Rasuulka AIlah in ka badan toddobaatan cutub oo Quraanka ah iyo asxaabtii Rasuulka waxay ogaadeen inaan si fiican u fahmay kitaabka Alle (marka loo eego iyaga), iyo haddii aan ahaan lahaa si aan u ogaado in qof iga faham fiican yahay, waan u tegi lahaa. Shaqiq wuxuu yiri: waxaan dhex fadhiyay asxaabtii Mubkmmad (ﷺ) laakiin ma aanan maqlin qof diiday taas (yacni akhrintiisa) ama aan ku helay qalad.
Saxiix Muslim 2462: Kitaabka 44, Xadiiska 162
Waxyaabo dhowr ah ayaa taagan:
Cabdullaahi b. Mascuud wuxuu u sheegaa dadka raacsan inay qariyaan Qur’aankooda sababo jira awgood.
Waxaad mooddaa inuu qof amray in uu adeegsado akhrin kale. Middaas waxaa si fiican loo fahmay inay tixraacayso waqtigii Cusmaan uu jaangooyey nuqulkii Quraanka.
Ibnu Mascuud diidmadiisii ​​beddelka sida uu u akhriyay Quraanka waxay ahayd: Aniga (Mascuud) ayaa si fiican u fahmay kitaabka
Shaqiq wuxuu sheegay in saxaabadii Muxammad aysan khilaafin Mascuud.
Qaybaha qoraalka ee Quraanka manta
Ka dib daabacaadii Cusmaan,si kastaba ha ahaatee, akhrinta kala duwan ayaa weli jirtay.
Ka dib daabacaadii Cusmaan, si kastaba ha ahaatee, akhrinta kala duwan ayaa weli jirtay. Dhab ahaantii, waxaad moodaa in qarnigii 4aad Nebigii ka dib la soo celiyey akhrinta kala duwan. Markaa in kasta oo maanta akhriska ugu weyn ee Carabtu yahay Hafs (ama Hofs), haddana waxaa jira Warsh, oo inta badan laga isticmaalo Waqooyiga Afrika, Al-Duri, oo inta badan laga isticmaalo Galbeedka Afrika iyo weli kuwa kale. Farqiga u dhexeeya akhrintaani waxay u badan tahay higaada iyo xoogaa kala duwanaansho eray ah, badiyaa iyada oo aan wax saamayn ah ku yeelanayn macnaha, laakiin kala duwanaanshaha qaarkood oo saamayn ku leh macnaha kaliya duruufaha dhow laakiin aan ku jirin feker ballaaran.
Markaa waxaa jira ikhtiyaar ku saabsan nooca Qur’aanka ee la adeegsanayo.
Waxaan barannay in maanta ay jiraan Qur’aan akhrisyo kala duwan oo Carabi ah, waxayna soo martay hab tafatir iyo xulasho kadib dhimashadii nebi Maxamed. Sababta ay maanta u leedahay kala duwanaansho aad u yar qoraalka Qur’aanka ayaa ah maxaa yeelay dhammaan noocyada kale ee qoraalka ayaa la gubay.
wakhtigaas. Quraanku ma laha raad raacyo akhris oo beddel ah, sababtuna ma aha in uusan lahayn akhrin kale, laakiin waa la burburiyey. Cusmaan waxay u badan tahay inuu soo saaray Qur’aan akhris wanaagsan, laakiin keligii ma ahayn, mana ahayn mid muran la’aan la sameeyay. Sidaa darteed fikirka sida weyn loo aqbalay ee Qur’aanku waa “kitaabka asalka ah – isku luqad, xarfo iyo akhrin. Ma jirto meel fasiraadda aadanaha ”waa khalad. In kasta oo Baybalka iyo Qur’aanka labaduba ay leeyihiin akhrino kala duwan, haddana labadooduba waxay haystaan ​​caddaymo qoraal gacmeed oo xooggan oo tilmaamaya in qoraalka siduu maanta yahay uu ku dhow yahay kii asalka ahaa. Labaduba waxay na siin karaan matalaad lagu kalsoonaan karo oo asalka ah. Kuwo badan ayaa ku mashquulsan raadinta inay fahmaan farriinta Buugaagta iyagoo leh xushmad aan loo baahnayn oo loogu talagalay habka badbaadinta Qur’aanka iyo nacayb aan loo baahnayn oo loogu talagalay habka badbaadinta Baybalka. Way fiicnaan lahayd inaan xoogga saarno fahamka Buugaagta.Taasi waa sababta markii hore loo siiyay. Meel fiican oo laga bilaabo waa Aadan.
Tags:Abu bakar iyo quranal-duri quranciwaanka al-Tawbaciwaanka tawbahcuthmaan iyo quranquraanka samayntaquran ka cuthmansuurada 9 ee quraankatodoba tafsiir quraankauthmans quranwarsh. quraanxadiisyo ku saabsan quraankaxafs quran